काठमाडौँ । सन् २००९ मा रिलिज भएको हलिवुड फिल्म अवतारको नाममा अहिलेसम्म विश्वको सबैभन्दा धेरै कमाउने फिल्मको नाम लेखिएको छ । यो फिल्म टाइटानिकका निर्देशक जेम्स क्यामरुनले लेखेका र निर्देशन गरेका हुन् । यो फिल्मले जुरासिक पार्क र टाइटानिकका सबै रेकर्ड तोडेको थियो । यो फिल्मको दोस्रो भाग २०२२ को डिसेम्बरमा आउँदैछ तर यसको ट्रेलर रिलिज भएको छ ।
कसरी बन्यो कथा ?
फिल्म अवतारका लेखक तथा निर्देशक जेम्स क्यामरुनले बाल्यकालमा धेरै विज्ञान कथाका किताब पढेका थिए, त्यसपछि उनलाई त्यसमाथि फिल्म बनाउने विचार आयो । क्यामरुनले टाइटानिकको निर्माणका क्रममा अवतार फिल्मको ८० पृष्ठको स्क्रिप्ट लेखेका थिए र टाइटानिक रिलिज भएपछि मात्रै यसमा फिल्म बनाउने घोषणा गरेका थिए ।
सन् १९९७ मा हाइटेक प्रविधि नहुँदा फिल्म बन्न सकेन ।
जेम्स क्यामरुनले यो फिल्म बनाउने घोषणा गरे तर उनका धेरैजसो पात्रहरू काल्पनिक भएकाले उनलाई यसमा फिल्म बनाउनको लागि हाईटेक प्रविधि चाहिन्छ । त्यसैले त्यतिबेला उनले यो आइडियामा थप काम गर्न सकेनन् तर यो कथामा फिल्म बनाउने विचार भने छाडेनन् ।
फिल्मको लागि फरक भाषा
यस फिल्मको लागि, क्यामरुनले २००६ मा फेरि स्क्रिप्टमा काम गरे, र उनले फिल्ममा चित्रण गरिएका एलियनहरूका लागि फरक भाषा पनि सिर्जना गरे । जुन युएससी मा भाषाविद् डा. पॉल फ्रोमरद्वारा बनाईएको हो । यो भाषा १००० शब्दहरू मिलेर बनेको थियो । जसमा जेम्स क्यामरुनले ३० शब्द थपे । यो फिल्म बनाउन जेम्स क्यामरुनले छुट्टै सेटअप पनि गरेका थिए ।
ड्रेस डिजाइनरसँग २ वर्ष काम गरे
क्यामरुनले २००५ देखि २००७ सम्म प्रसिद्ध डिजाइनर जोर्डु स्किलसँग फिल्ममा आफ्नै पात्रहरू सिर्जना गर्न काम गरे । यस क्रममा क्यामरुनले चित्रकारसँग काम गरे र फिल्मको लागि पोशाक डिजाइन गरे ।
फक्सले फिल्म बनाउन अस्वीकार
यो फिल्ममा काम गर्न पैसा चाहिन्छ, तर फक्सले उच्च बजेटको कारण फिल्म निर्माण गर्न अस्वीकार गर्यो । तर, यसको एउटा कारण जेम्स क्यामरुनको फिल्म टाइटानिकको लागत र फिल्म बनाउन लागेको बढी समय थियो । त्यसपछि क्यामरुनले डिज्नी वर्ल्डलाई फिल्म निर्माण गर्न आग्रह गरे । डिज्नीले यो फिल्म बनाउन सकारात्मक भएपछि फक्स स्टुडियोले यो फिल्मलाई स्वीकार गर्यो ।
फरक क्यामेरा डिजाइन
क्यामरुनले यस फिल्ममा कलाकारहरूको अभिव्यक्ति शूट गर्नको लागि छुट्टै क्यामेरा पनि डिजाइन गरे, जसबाट अभिव्यक्तिहरू शूट गरियो र पछि एनिमेसनको लागि प्रयोग गरियो ।
पहिलो भागको सुटिङ सन् २००६ मा सुरु भएको थियो ।
यस फिल्मको पहिलो भागको सुटिङ सन् २००६ मा सुरु भएको थियो । यसका लागि सुटिङ लोकेशन पूर्णरुपमा बनाइएको थियो । फिल्मको लोकेशन बनाउनका लागि डिजाइनरहरुले धेरै दिन मिहिनेत गरेका थिए । यो फिल्म २००९ मा क्यामरुनद्वारा पर्दामा ल्याइयो ।
सन् २००९ मा क्यामरुनले सिक्वेल बनाउने निर्णय गरेका थिए ।
सन् २००९ मा अवतार रिलिज हुनुअघि नै निर्देशकले पहिलो फिल्म सफल भए पक्कै पनि सिक्वेल बनाउने घोषणा गरेका थिए । अवतारको कीर्तिमानी कमाई पछि २०१० मा दुईवटा सिक्वेल घोषणा गरियो । अवतार २ सन् २०१४ मा रिलिज हुने भनिएको थियो तर प्रि-प्रोडक्सन कार्यमा भएको ढिलाइका कारण ७ वर्षपछि २०२२ मा रिलिज हुँदैछ ।
फिल्मको सिक्वेल कहिले रिलिज हुन्छ ?
लगातार आठ स्थगन पछि, अवतार-२ डिसेम्बर १६, २०२२ मा रिलीज को लागी निर्धारित छ । यसबाहेक अवतार–३ डिसेम्बर-२३, २०२४ मा, अवतार–४ डिसेम्बर १८, २०२६ र अवतार–५ डिसेम्बर २२, २०२८ मा रिलिज हुनेछ । रिलिज हुनुअघि यी फिल्मको नाम पनि परिवर्तन गरिने भएको छ ।
२३७ मिलियन डलरको बजेटमा तयार भएको अवतारको पहिलो भागको विश्वव्यापी सङ्कलन २८ सय ४६ मिलियन डलर थियो । यो फिल्मभन्दा पहिले यो रेकर्ड एभेन्जर्स एन्डगेमको नाममा थियो, जसले विश्वभर २७ सय ९७ मिलियन डलरको व्यापार गरेको थियो । अब २५० मिलियन डलरको बजेटमा तयार भएको अवतार २ ले पनि रेकर्ड तोड्ने अनुमान गरिएको छ ।
प्रत्येक भागको लागत २५० मिलियन डलर
अवतारका ४ वटा सिक्वेल आउँदैछन् । प्रत्येक भागको लागि २५० मिलियन डलरको बजेट सेट गरिएको छ । यस हिसाबले फिल्मका ५ सिक्वेलसहितको यो फ्रेन्चाइजको कुल बजेट १२३७ मिलियन डलर छ । यो संसारको सबैभन्दा ठूलो बजेट फ्रेंचाइजी भएको छ ।
पानीमुनि शूट गर्ने निर्णय
एक अन्तर्वार्ताका क्रममा क्यामरुनले यो फिल्मको निर्माणलाई पागलपन भनेका छन् । अवतारको पहिलो पार्टले यति राम्रो कमाइ नगरेको भए सिक्वेल बन्ने थिएन । फिल्मको निर्माण टोली पानीमुनि छायांकनको विरुद्धमा थियो । मानिसहरूले क्यामरुनलाई सबै दृश्यहरूलाई ताराहरू मार्फत बाहिर शूट गरेर एनिमेसन गरेर पानीमुनि देखाउन सुझाव दिए । एक परीक्षण पनि गरियो, तर यसले क्यामरुनलाई सन्तुष्ट पार्न सकेन र उनले सबै दृश्यहरू पानीमुनि शूट गर्ने निर्णय गरे ।
अवतार २ को सुटिङ १५ अगस्ट २०१७ मा क्यालिफोर्नियाको म्यानहट्टन बिचमा सुरु भएको थियो । योसँगै यसको तेस्रो भाग न्युजिल्याण्डमा छायांकन गरिएको छ । पछिल्ला तीन वर्षमा यसको दोस्रो भाग र तेस्रो भागको छायांकन लगभग सकिएको छ ।
फिल्मको पहिलो सिक्वेलको कथा के छ ?
फिल्मको पहिलो सिक्वेलले ज्याक सीली र नेतिरी परिवारको कथा बताउँछ, जो सँगै हुन जे पनि गर्न इच्छुक छन् । तिनीहरूलाई घरबारविहीन बनाइन्छ र पान्डोराको फरक क्षेत्रमा पठाइन्छ, जहाँ तिनीहरू ठूलो खतरामा छन् । ज्याक संसारको संघर्षबाट पूर्णतया अनजान छ, जसले यो जोडीलाई बाँच्न धेरै गाह्रो बनाउँछ ।
यस्तो छ फिल्मको स्टारकास्ट
अवतार २ मा पहिलो भाग जस्तै केट विन्सलेट, साम वर्थिंगटन, जोए साल्दाना, स्टीफन लङ, भिन डिजेल, एडी फाल्को, क्लिफ कर्टिस महत्वपूर्ण भूमिकामा देखिनेछन् ।